၂၀၁၈ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား - ဝီကီပီးဒီးယား
၃၂ (အဖွဲ့ချုပ် ၅ ခုမှ)
၁၂ (အိမ်ရှင်မြို့ ၁၁ မြို့တွင်)
ပြင်သစ် (2nd title)
၁၆၉ (တစ်ပွဲလျှင် ၂.၆၄ ဂိုးနှုန်း)
၃၀၃၁၇၆၈ (တစ်ပွဲလျှင် ၄၇၃၇၁ ဦးနှုန်း)
ဟယ်ရီကိန်း (၆ ဂိုး)
၂၀၁၈ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားသည် ၂၁ ကြိမ်မြောက် ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားဖြစ်ပြီး ဖီဖာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းများ လေးနှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ယှဉ်ပြိုင်ကြသည့် နိုင်ငံတကာကစားပွဲလည်းဖြစ်သည်။ ထိုပွဲစဉ်များကို ရုရှားနိုင်ငံတွင် ၁၄ ဇွန်မှ ၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ အိမ်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပခွင့်ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဂျာမနီကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲပြီးလျှင် ဥရောပ၌ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည်ကျင်းပခွင့်ရခဲ့သော ပွဲလည်းဖြစ်သည်။ ခရီးသွားချိန်ကို ထိန်းညှိနိုင်ရန်အလို့ငှာ ဥရောပရုရှားနှင့် ယူရယ်တောင်တန်းအနောက်ပိုင်းရှိ မြို့များမှ အားကစားကွင်းများကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲတွင် နိုင်ငံအသင်း ၃၂ သင်းပါဝင်ပြီး ၃၁ သင်းမှာ ခြေစစ်ပွဲများမှတဆင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး အိမ်ရှင်အသင်းတစ်သင်းသာလျှင် အလိုအလျောက်ဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ပွဲစဉ် ၆၄ ပွဲရှိပြီး မြို့ကြီး ၁၁ မြို့မှ အားကစားကွင်း ၁၂ ကွင်းတွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်လုပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မော်စကိုမြို့ရှိ လုရှ်နီကီ အားကစားကွင်းတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ရရှိမည့်အသင်းသည် ၂၀၂၁ ဖီဖာ တိုက်ကြီးများဖလားကို အလိုအလျောက်ဝင်ခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
၁.၁ ခြေစစ်ပွဲများ ကျင်းပခြင်း
၂.၂ အသင်းလိုက် အခြေပြုစခန်းများ
၃ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ
၅.၂ Group A
၅.၃ Group B
၅.၄ Group C
၅.၅ Group D
၅.၆ Group E
၅.၇ Group F
၅.၈ Group G
၅.၉ Group H
၆.၂ ၁၆ သင်းအဆင့်
၈ ကမကထပြုသော ကုမ္ပဏီများ
ဖီဖာကမ္ဘာဖလားသမိုင်း၏ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အလိုအလျောက်ဝင်ခွင့်ရသော အိမ်ရှင် ရုရှားနိုင်ငံမှအပ ဖီဖာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၂၀၉ နိုင်ငံမှ ဘောလုံးအသင်းများအားလုံး ဝင်ခွင့်တွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဇင်ဘာဘွေနှင့် အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းတို့သည် ၎င်းတို့ ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲများ မကစားမီတွင် ခြေစစ်ပွဲအား ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့တော့ပေ။ ပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ခွင့်နေရာကို ၂၀၁၄ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားကျင်းပစဉ်ကအတိုင်း မပြောင်းလဲပဲ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံး ခြေစစ်ပွဲကို ၁၂ မတ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အရှေ့တီမောနိုင်ငံ၊ ဒီလီမြို့တွင် အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချူပ် ခြေစစ်ပွဲ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပထမဆုံး ကျင်းပခဲ့သည်။ ပဏာမ ခြေစစ်ပွဲမဲနှိုက်ခြင်းကို စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ ကွန်စတန်နင်နန်းတော်တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့၌ ဒေသစံတော်ချိန် 18:00 (UTC+3) တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားသို့ ခြေစစ်ပွဲအောင်သော အသင်း ၃၂ သင်းတွင် အသင်း ၂၀ မှာ ယခင် ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားတွင်လည်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသော အသင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ဤနှစ်တွင် လူဦးရေအရ အနည်းဆုံးနိုင်ငံများဖြစ်ကြသော အိုင်းစလန်းနှင့် ပနားမားနိုင်ငံအသင်းတို့သည် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကမ္ဘာ့ဖလားသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အနည်းဆုံး ဖလားသုံးခုစာလောက် ဝင်ခွင့်မရခဲ့ပဲ ဤနှစ်တွင်မှ တကျော့ပြန် ဝင်လာသော အသင်းများလည်း ရှိသေးသည်။ အီဂျစ်အသင်းသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၂၈ နှစ်ကြာမှ ကမ္ဘာ့ဖလားသို့ ဝင်ခွင့်ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့အတူ ၁၉၉၈ ခုနှစ်က နောက်ဆုံးကစားခဲ့ရသော မော်ရိုကိုအသင်းလည်း ပြန်လည်ပါဝင်နိုင်ခဲ့သည်။ ပီရူးအသင်းသည်လည်း ၃၆ နှစ်ကြာ ဝေးကွာခဲ့သော ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ကွာတားဖိုင်နယ်အထိ ရောက်ခဲ့သော ဆီနီးဂေါအသင်းလည်း ယခုနှစ် ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ဤနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားသည် နော့ဒစ်နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံ (ဒိန်းမတ်၊ အိုင်းစလန်းနှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံ)နှင့် အာရပ်နိုင်ငံလေးနိုင်ငံ (အီဂျစ်၊ မော်ရိုကို၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် တူနီးရှားနိုင်ငံ)တို့ ပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်သည့် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် လေးကြိမ်ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သော အီတလီအသင်း(၁၉၅၈ ခုနှစ် ပထမဆုံအကြိမ်ရသည်မှစ၍)နှင့် ဒုတိယသုံးကြိမ်ရရှိခဲ့သော နယ်သာလန်အသင်းတို့ ခြေစစ်ပွဲမအောင်မြင်ခဲ့သည်မှာ ထူးခြားသော ကိစ္စရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့မျှမကသေး အခြားသော တိုက်ကြီးများ၏ ဖလားအသီးသီးမှ ချန်ပီယံများဖြစ်သည့် ၂၀၁၇ အာဖရိကနိုင်ငံများဖလားရရှိသူ ကင်မရွန်းအသင်း၊ ကိုပါအမေရိကဖလားချန်ပီယံနှင့် ၂၀၁၇ တိုက်ကြီးများဖလား ဒုတိယရရှိခဲ့သူ ချီလီအသင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သမုဒ္ဒပိုင်းဇုန် နိုင်ငံများဖလား ချန်ပီယံ နယူးဇီလန်အသင်းနှင့် CONCACAF ရွှေဖလားချန်ပီယံ အမေရိကန်အသင်းတို့ပါ ကမ္ဘာ့ဖလားဝင်ခွင့်ကို ကျရှုံးခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဖီဖာမှ ကစားပွဲတစ်ပွဲကစားရန်မတိုင်မှီ ထုတ်ပယ်ခဲ့သော အသင်းများ
မဲခွဲခြင်းကို မော်စကိုမြို့ ကရင်မလင်အစိုးရနန်းဆောင်တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ မော်စကိုစံတော်ချိန် ၁၈:၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ အသင်း ၃၂ သင်းကို အသင်း ၄ သင်းပါဝင်သော အုပ်စု ၈ ခုအဖြစ် မဲနှိုက်၍ အုပ်စုခွဲခဲ့သည်။
မဲနှိုက်ရန်အတွက် အသင်းများကို မဲအိုးလေးလုံးတွင် အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ဖီဖာကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ ခွဲဝေသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ မဲအိုး ၁ တွင် အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ ရုရှားအသင်းသည် အလိုအလျောက် A1 တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၎င်းအသင်းနှင့် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အသင်း ၇ သင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ မဲအိုး ၂ တွင် နောက်ထပ်အကောင်းဆုံး အသင်း ရှစ်သင်းပါဝင်သည်။ ထို့အတူ မဲအိုး ၃ နှင့် ၄ တွင် ကမ္ဘ့ာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အသီးသီး အစဉ်လိုက်ပါဝင်သွားလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ယခင်မဲနှိုက်ခဲ့ပုံများနှင့် ကွဲပြားနေသည်။ ယခင်က မဲအိုး ၁ တွင်သာ ဖီဖာကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေါ်တွင် အခြေခံပြီး ကျန်သည့်မဲအိုးများမှာ ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာအချက်များ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ခွဲဝေခဲ့သည်။ သို့ပေမယ့်လည်း ယခင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များအား ထိန်းသိမ်းသည့်သဘောဖြင့် တိုက်ကြီးများတူသော အသင်းနှစ်သင်းအား အုပ်စုအဆင့်တွင် မတွေ့ဆုံအောင် မဲနှိုက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဥရောပယူနီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှအသင်းများမှာမူ အုပ်စုတစ်ခုတွင် နှစ်သင်းအထိပါဝင်ပေသည်။
ရုရှား (၆၅) (အိမ်ရှင်)
အသင်းတိုင်းသည် ပထမဆုံးအနေဖြင့် ကစားသမား ၃၀ ဦး ပါဝင်သော ပဏာမအသင်း၏ အမည်စာရင်းကို ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ပဏာမအသင်းတွင် နောက်ဆုံးအသင်း(အမှန်တကယ်ကန်မည့်လူစာရင်း)အတွက် ၂၃ ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုအထဲတွင် သုံးယောက်မှာ ဂိုးသမားများဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအသင်းတွင်ပါဝင်သော ကစားသမားများထဲမှာ အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့သူရှိလျှင် ထိုသူအား အသင်း၏ ပထမဆုံးပွဲမတိုင်မီ ၂၄ နာရီကြိုတင်၍ ထုတ်ပယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုကစားသမားအတွက် အစားထိုးမည်ကစားသမားမှာ ပဏမလူစာရင်းတွင် မပါဝင်ခဲ့သော ကစားသမားများကို အစားထိုးနိုင်သည်။
ပဏမလူစာရင်းတွင် ပါဝင်သော ကစားသမားများသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ ၂၁ ရက်မှ ၂၇ ရက်အတွင်း မဖြစ်မနေ အနားပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ချွင်းချက်အနေဖြင့် မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကစားမည်ဖြစ်သော ၂၀၁၈ ယူအီအက်အေ ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ကစားမည့် ကစားသမားများ မပါဝင်ပေ။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ယာယီကစားသမားစာရင်းကို အမည်ပေးရာတွင် ၃၀ မှ ၃၅ ထိ တိုး၍ပေးခဲ့သည်။
Wikimedia Commons တွင် ၂၀၁၈ ဖီဖာ ကမ္ဘာဖလား၏ အားကစားကွင်းများ နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
ရုရှားသည် ကရာ့စနိုဒါး၊ ကာဇန်၊ ကာလင်နင်ဂရတ်၊ စိန့်ပီတာစဘတ်၊ ဆာမာရာ၊ ဆာရန်၊ ဆိုချီ၊ ညီးရှ်နီး နော့ဗ်ဂရတ်၊ ဗော်ဂါဂရတ်၊ မော်စကို၊ ယာရိုစလဗာလ်၊ ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ်နှင့် ရပ်စတော့ဗ် နာ ဒန်နူမြို့များတွင် ပြိုင်ပွဲများ လက်ခံကျင်းပနိုင်ရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။ ထိုမြို့များသည် ဥရောပရုရှား၏ အတွင်းသို့မဟုတ် ထိုဒေသ၏အနီးနားတွင်သာရှိသည့်အတွက် အားကစားအသင်းများ ခရီးသွားချိန် လျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပြုလွှာရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ "ရုရှားသည် ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့် မြို့ ၁၃ မြို့နှင့် အားကစားကွင်း ၁၆ ကွင်းကို အသုံးပြုမည်ဟု ဆန္ဒပြုခဲ့ပြီး ထိုသည်မှာ ဖီဖာ၏ အနည်းဆုံး လိုအပ်ချက်ထက်ပင် ပို၍နေသည်။ ထိုအားကစား ၁၆ ကွင်းတွင် ၃ ကွင်းများ အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်မည်ဖြစ်ပြီး ၁၃ ကွင်းမှာ အသစ်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။"
၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ရုရှားသည် အားကစားကွင်းများကို ၁၆ ကွင်းမှ ၁၄ ကွင်းသို့ လျော့ချခဲ့သည်။ မော်စကိုဒေသကြီးတွင် တည်ဆောက်ရန် အဆိုပြုထားသော ပါဒိုးစ်ခ် အားကစားကွင်းတည်ဆောက်မှုကို ဒေသခံအစိုးရအဖွဲ့မှ ကန့်ကွက်ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ မြို့တော်တွင်လည်း အာခရိကျီယာ အရီနာနှင့် ဒိုင်နမို အားကစားကွင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်တည်ဆောက်ကြရာ အာခရိကျီယာ အရီနာသည် စောလျင်စွာအသင့်ဖြစ်ခဲ့မှုကြောင့် ဒိုင်နမိုကွင်းအား အသုံးပြုရန် မလိုအပ်တော့ပေ။
ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာမြို့များ အပြီးသတ်ရွေးချယ်မှု ကြေညာခြင်းကို ၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့်မြို့ကို ၁၁ မြို့ထိ လျော့ချခဲ့ပြီး အားကစားကွင်းများကိုလည်း ၁၂ ကွင်းအထိ လျော့ချခဲ့ရာ ကရာ့စနိုဒါးနှင့် ယာရိုစလဗာလ်မြို့တို့သည် အပြီးသတ်စာရင်းမှ ကျန်ခဲ့သည်။ ထိုအားကစားကွင်း ၁၂ ကွင်းတွင်လည်း အားကစားကွင်း ၃ ကွင်း(လုရှ်နီကီ၊ ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ်နှင့် ဆိုချီ)တို့မှာ ပြုပြင်မွမ်းမံရုံသာဖြစ်ပြီး ကျန် ၉ ကွင်းမှာ အသစ်ဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်ရေးအတွက် ဒေါ်လာ ၁၁.၈ ဘီလီယံအသုံးပြုခဲ့သည်။
ခရစ် အန်ဂါဦးဆောင်သော ဖီဖာစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရုရှားသို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တို့ဘာလတွင် ရောက်ရှိခဲ့ကြရာ ထိုအဖွဲ့သည် စိန့်ပီတာစဘတ်၊ ဆိုချီ၊ ကာဇန်နှင့် မော်စကိုမြို့များရှိ အားကစားကွင်းများကို သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ထိုအဖွဲ့၏ ကောင်းမွန်သော မှတ်ချက်များဖြင့် ကျေနပ်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ဖီဖာနှင့် ရုရှားနိုင်ငံပြိုင်ပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီတို့သည် ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းအသုံးပြုမည့် အားကစားကွင်းများ၏ တရားဝင်အမည်ကို သဘောတူမှု ရခဲ့ကြသည်။
လုရှ်နီကီ အားကစားကွင်းနှင့် စိန့်ပီတာစဘတ် အားကစားကွင်း(ရုရုားနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးအားကစားကွင်း ၂ ကွင်း)တွင် ပြိုင်ပွဲများ အများဆုံးကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး အားကစားကွင်းတစ်ခုစီတွင် ၇ ပွဲ ကစားမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုချီ၊ ကာဇန်၊ ညီရှ်နီး နော့ဗ်ဂရတ်နှင့် ဆာမာရာမြို့များတွင် ၆ ပွဲစီ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ကွာတားဖိုင်နယ် တစ်ပွဲစီ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ မော်စကိုရှိ အာခရိကျီယာ အားကစားကွင်နှင့် ရပ်စတော့ဗ် နာ ဒန်နူတို့တွင် ၅ ပွဲစီ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ဗော်ဂါဂရပ်၊ ကာလင်နင်ဂရတ်၊ ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ်နှင့် ဆာရန်တို့တွင် ၄ ပွဲစီကျင်းပမည်ဖြစ်ကာ ရှုံးထွက်ပြိုင်ပွဲများကို ထိုကွင်းများ၌ ကျင်းပမည် မဟုတ်ပါ။
ရုရှားမြို့ ၁၁ မြို့ရှိ အားကစားကွင်း ၁၁ ကွင်းအား ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။
ဆာမာရာမြို့: ဆာမာရာ အရီနာ (ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ဝင်ဆန့်သော ပရိသတ်ဦးရေ: ၄၅,၀၀၀)။ တရားဝင်တည်ဆောက်ရေးကို ၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၂၁ ဧပြီ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ရေးပရောဂျက်အား အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ညီးရှ်နီး နော့ဗ်ဂရတ်မြို့: ညီးရှ်နီး နော့ဗ်ဂရတ် အားကစားကွင်း (ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ဝင်ဆန့်သော ပရိသတ်ဦးရေ: ၄၅,၀၀၀)။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ညီးရှ်နီး နော့ဗ်ဂရတ် အားကစားကွင်းတည်ဆောက်ရေးအား အစပြုခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ဗော်ဂါဂရတ်မြို့: ဗော်ဂါဂရတ် အရီနာ (ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ဝင်ဆန့်သော ပရိသတ်ဦးရေ: ၄၅,၀၀၀)။ ဗော်ဂါဂရတ်မြို့၏ ပင်မအရီနာကို အမိမြေမှခေါ်သံ ရုပ်တုကြီးအောက် ယခင်က ဖြိုချခဲ့သော ဗဟိုအားကစားကွင်းနေရာတွင်ပင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးအပ်နှံ့ခဲ့သည်။
ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ်မြို့: ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ် အရီနာ (ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ဝင်ဆန့်သော ပရိသတ်ဦးရေ: ၃၅,၀၀၀)။ ယဲ့ကာကျယ်ရင်ဘုဂ်မြို့၏ ဗဟိုအားကစားကွင်းအား ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် ရည်ရွယ်၍ ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ် ၃၅,၀၀၀ ဝင်ဆံသည့် အားကစားကွင်းဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ဆာရန်မြို့: မာဒိုဗီးယား အရီနာ (ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ဝင်ဆန့်သော ပရိသတ်ဦးရေ: ၄၄,၀၀၀)။ ဆာရန်မြို့ရှိ အားကစားကွင်းအား ၂၀၁၂ ခုနှစ် စပါတာကီရ်ဒါ( all-Russian Spartakiad) ဖွင့်ပွဲအမှီ အပ်နှံ့နိုင်ရန်စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း ကွင်းဖွင့်ပွဲအား ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှပြုလုပ်ရန် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့ရသည်။ ဤအရီနာ၌ ပထမဆုံးသော အားကစားပွင် ဧပြီ ၂၁ ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
ရပ်စတော့ဗ် နာ ဒန်နူမြို့: ရပ်စတော့ဗ် အရီနာ (ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ဝင်ဆန့်သော ပရိသတ်ဦးရေ: ၄၅,၀၀၀)။ ဒွန်မြစ်ဘယ်ဘက်ကမ်းတွင်းတည်ရှိသော အားကစားကွင်းအား တည်ဆောက်ခြင်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်ခဲ့သည်။
ကာလင်နင်ဂရတ်မြို့: ကာလင်နင်ဂရတ် အားကစားကွင်း (ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ဝင်ဆန့်သော ပရိသတ်ဦးရေ: ၃၅,၀၀၀)။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် အုတ်မြစ်ချခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အားကစားကွင်းသစ်ကြီး၌ ပထမဆုံးကစားပွဲကို ကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ကာဇန်မြို့: ကာဇန် အရီနာ (ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ဝင်ဆန့်သော ပရိသတ်ဦးရေ: ၄၅,၀၀၀)။ ဤအားကစားကွင်းကို ၂၀၁၃ နွေရာသီ တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက် ရည်ရွယ်၍ တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 2015 World Aquatics Championship နှင့် the 2017 FIFA Confederations Cup တို့ကို ဤကွင်း၌ ကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် FC Rubin Kazan အသင်း၏ အိမ်ကွင်းအဖြစ်လည်း အသုံးပြုသည်။
မော်စကိုမြို့: စပါးတက်ခ် အားကစားကွင်း (ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ဝင်ဆန့်သော ပရိသတ်ဦးရေ: ၄၅,၀၀၀)။ စပါးတက်ခ် မော်စကိုအသင်း၏ အိမ်ကွင်းဖြစ်ပြီး ဖီဖာ၏ လိုလားချက်များအရ ၂၀၁၈ ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ဤကွင်း၏ အမည်ကို စပါးတက်ခ် အားကစားကွင်းအစား အာခရိကျီယာ အရီနာဟု ပြောင်းလဲသုံးစွဲမည်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးကစားပွဲကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပေးခဲ့သည်။
ဆိုချီမြို့: ဖစ်ရှ် အားကစားကွင်း (ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ဝင်ဆန့်သော ပရိသတ်ဦးရေ: ၄၅,၀၀၀)။ ဤအာကစားကွင်းမှ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲနှင့် ပိတ်ပွဲပြုလုပ်ပေးခဲ့သော အားကစားကွင်း ၂၂ ကွင်းထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် သမိုင်းတင်ခဲ့သည့် အားကစားကွင်းဖြစ်သည်။ ဆိုချီ ၂၀၁၄ ပြိုင်ပွဲပြီးသည့်နောက် ၂၀၁၇ ဖီဖာ တိုက်ကြီးများဖလားနှင့် ၂၀၁၈ ဖီဖာ ကမ္ဘာဖလားအတွက် ရည်ရွယ်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့: စိန့်ပီတာစဘတ် အားကစားကွင်း (ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ဝင်ဆန့်သော ပရိသတ်ဦးရေ: ၆၇,၀၀၀). ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် အားကစားကွင်းတည်ဆောက်ရေးအား စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်တွင်မှ တရားဝင်ပြီးစီးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအားကစားကွင်း၌ ၂၀၁၇ ဖီဖာ တိုက်ကြီးများဖလားကို ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားနှင့် ၂၀၂၀ ယူအီးအက်ဖ်အေ ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲများကိုလည်း လက်ခံကျင်းပေပေးသွား ဖြစ်သည်။
မော်စကိုမြို့: လုရှ်နီကီ အားကစားကွင်း (ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း ဝင်ဆန့်သော ပရိသတ်ဦးရေ: ၈၀,၀၀၀)။ နိုင်ငံအတွင်းတွင် အကြီးဆုံးသော အားကစားကွင်းကြီးဖြစ်ပြီး ပြုပြင်တည်ဆောက်ရန်အတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ ပိတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အပြီးသတ်ခဲ့သည်။
လုရှ်နီကီ အားကစားကွင်း အာခရိကျီယာ အရီနာ
(စပါးတက်ခ် အားကစားကွင်း) ကရဲ့စတော့ဗ်စကီး အားကစားကွင်း
(စိန့်ပီတာစဘတ် အားကစားကွင်း) ကာလင်နင်ဂရတ် အားကစားကွင်း
Capacity: ၈၁,၀၀၀ Capacity: ၄၅,၃၆၀ Capacity: ၆၈,၁၃၄ Capacity: ၃၅,၂၁၂
ကာဇန် အရီနာ ညီးရှ်နီး နော့ဗ်ဂရတ် အားကစားကွင်း
Capacity: ၄၅,၃၇၉ Capacity: ၄၄,၈၉၉
(ဆာမာရာမြို့) ဗော်ဂါဂရတ် အရီနာ
(ကွင်းသစ်) Capacity: ၄၅,၅၆၈
မာဒိုဗီးယား အရီနာ ရပ်စတော့ဗ် အရီနာ ဖစ်ရှ် အိုလံပစ် အားကစားကွင်း
(ဖစ်ရှ် အားကစားကွင်း) ဗဟိုအားကစားကွင်း
(ကွင်းသစ်) Capacity: ၄၅,၀၀၀
(ကွင်းသစ်) Capacity: ၄၇,၆၅၉ Capacity: ၃၅,၆၉၆
စေတနာ့ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာများကို ၂၀၁၈ ရုရှားနိုင်ငံ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီ ၁ ဇွန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်လက်ခံခဲံသည်။ ၂၀၁၈ ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား ရုရှားစေတနာ့ဝန်ထမ်းအစီအစဉ်မှာ စံချိန်တစ်ခုတင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ တွင် လျှောက်လွှာလက်ခံခြင်းပြီးဆုံးရာ ပြိုင်ပွဲကျင်းပသူတို့သည် လျှောက်လွှာပေါင်း ၁၇၇,၀၀၀ ခု လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၇,၀၄၀ ဦးအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲလက်ခံကျင်းပရာ မြို့ ၁၁ မြို့တွင် မြို့တော်စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၈,၀၀၀ ဦးထက်ပို လိုအပ်မည်ဖြစသည်။ ဒေသတွင်းပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှ တက္ကသိုလ် ၁၅ ခုကို အခြေပြုပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းစင်တာ ၁၅ ခုဖွင့်လှစ်ကာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင်ပေးခဲ့သည်။ ဦးစားပေးအနေဖြင့် အဓိကနေရာများတွင် နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတက်ကျွမ်းသူနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ် အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားသူများအား ဦးစားပေးနေရာချပေးခဲ့သည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် ရုရှားနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် အခြားသောနိုင်ငံသားများ ဝင်ရောက်ထမ်းဆောင်နိုင်သည်။
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း ပွဲလတ်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူသည် အခမဲ့အများပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကို အသုံးပြုခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး ထိုအထဲတွင် အိမ်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပသော မြို့များအကြား ချိတ်ဆက်ထားသော ရထားဖြင့်သွားရသည့် ခရီးစဉ်များ၊ ထိုမြို့အတွင်းရှိ ဘက်စကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်သည်။
ပွဲချိန်ဇယားအပြည့်အစုံကို ဖီဖာမှ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။(ရှုံးထွက်ပွဲများမပါဝင်ပေ။ ၎င်းပွဲချိန်များကို နောင်တွင်မှ အတည်ပြုမည်ဖြစ်သည်။) ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်မဲနှိုက်ခဲ့ခြင်းအရ ရှုံးထွက်ပွဲများကို ဖီဖာမှ အချိန်ညှိပေးခဲ့ကြသည်။ ရုရှားအသင်းသည် အုပ်စုအဆင့်၏ A1 နေရာတွင် ရှိသဖြင့် အဖွင့်ပွဲကို မော်စကိုမြို့ရှိ လုရှ်နီကီအားကစားကွင်းတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျအသင်းနှင့် ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကစားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုလုရှ်နီကီအားကစားကွင်းတွင် ဆီမီးဖိုင်နယ် ဒုတိယပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁၁ ၌၊ ဗိုလ်လုပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့၌ အသီးသီးကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ရှိ ကရဲ့စတော့ဗ်စကီးအားကစားကွင်းတွင် ဆီမီးဖိုင်နယ်ပထမပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့၌လည်းကောင်း၊ တတိယလုပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့၌လည်းကောင်း အသီးသီးကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
အုပ်စုအသီးသီးမှ ထိပ်ဆုံးအသင်း နှစ်သင်းသည် ၁၆ သင်းအဆင့်သို့ တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဇယားတွင်ရှိသော အချိန်များမှာ ဒေသစံတော်ချိန်ကို အသုံးပြုထားသည်။
အုပ်စုအသီးသီးမှ အသင်းများ၏အဆင့်ကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။(regulations Article 32.5)
အုပ်စုပွဲအားလုံး၌ ရမှတ်များ(points obtained in all group matches)၊
အုပ်စုပွဲအားလုံး၌ ဂိုးကွာခြားချက်များ(goal difference in all group matches)၊
အုပ်စုပွဲအားလုံး၌ ရဂိုးအရေအတွက်(number of goals scored in all group matches)၊
အကယ်၍ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော စံသတ်မှတ်ချက် ၃ ခုနှင့် နှစ်သင်း (သို့) ထိုထက်ပိုသောအသင်းများ ရမှတ်တူညီခဲ့လျှင် အောက်ပါအတိုင်း ထပ်မံရှိ အဆင့်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
ထိုအသင်းများကြား အုပ်စုပွဲများတွင် ရရှိခဲ့သောအမှတ်များ၊
ထိုအသင်းများကြား အုပ်စုပွဲများတွင် ရရှိခဲ့သောဂိုးကွာခြားချက်များ၊
ထိုအသင်းများကြား အုပ်စုပွဲများတွင် ရရှိခဲ့သောရဂိုးများ၊
ပထမဆုံးအဝါကဒ်၊ အနှုတ် ၁ မှတ်၊
သွယ်ဝိုက်အနီကဒ် (ဒုတိယအဝါကဒ်)၊ အနှုတ် ၃ မှတ်၊
တိုက်ရိုက်အနီကဒ်၊ အနှုတ် ၄ မှတ်၊
အဝါကဒ်နှင့် တိုက်ရိုက်အနီကဒ်၊ အနှုတ် ၅ မှတ်
ဥရုဂွေး330050 +59ရှုံးထွက်အဆင့်သို့ တက်ရောက်ရန်
ရုရှား (H)3201 84+4 6
ဆော်ဒီအာရေဗျ310227 −5 3
အီဂျစ်300326 −4 0
၁၄ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၁၄)
၁၈:၀၀ MSK (UTC+3)
ဒိုင်လူကြီး: Néstor Pitana (Argentina
၁၅ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၁၅)
၁၇:၀၀ YEKT (UTC+5)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၂၇,၀၁၅ ဦး
၁၉ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၁၉)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၆၄,၄၆၈ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Enrique Cáceres (ပါရာဂွေး)
၂၀ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၂၀)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၂,၆၇၈ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Clément Turpin (ပြင်သစ်)
၂၅ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၂၅)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၁,၉၇၀ ဦး
ဗော်ဂါဂရတ် အရီနာ၊ ဗော်ဂါဂရတ်မြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၃၆,၈၂၃ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Wilmar Roldán (ကိုလံဘီယာ)
စပိန်312065 +15ရှုံးထွက်အဆင့်သို့ တက်ရောက်ရန်
ပေါ်တူဂီ312054 +1 5
အီရန်31 1 12204
မော်ရိုကို30 1224−2 1
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၆၂,၅၄၈ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Cüneyt Çakır (Turkey)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၃,၈၆၆ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Gianluca Rocchi (Italy)
ရော်နယ်လ်ဒို 4' (pen.), 44', 88'
၁၅:၀၀ MSK (UTC+3)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၂,၇၁၈ ဦး
မာဒိုဗီးယား အရီနာ၊ ဆာရန်မြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၁,၆၈၅ ဦး
၂၀:၀၀ KALT (UTC+2)
ကာလင်နင်ဂရတ် အားကစားကွင်း၊ ကာလင်နင်ဂရတ်မြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၃၃,၉၇၃ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Ravshan Irmatov (ဥဇဘက်ကစ္စတန်)
ပြင်သစ်32 103 1 +27ရှုံးထွက်အဆင့်သို့ တက်ရောက်ရန်
ဒိန်းမတ်312021 +1 5
ပီရူး31022203
ဩစတြေးလျ30 1225−3 1
၁၆ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၁၆)
၁၃:၀၀ MSK (UTC+3)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၁,၂၇၉ ဦး
၁၉:၀၀ MSK (UTC+3)
မာဒိုးဗီးယား အရီနာ၊ ဆာရန်မြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၀,၅၀၂ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Bakary Gassama (ဂမ်ဘီယာ)
၂၁ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၂၁)
၁၆:၀၀ SAMT (UTC+4)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၀,၇၂၇ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Antonio Mateu Lahoz (စပိန်)
၂၀:၀၀ YEKT (UTC+5)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၃၂,၇၈၉ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (ယူအေအီး)
၂၆ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၂၆)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၄,၀၇၃ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Sergei Karasev (ရုရှား)
ခရိုအေးရှား330071 +69ရှုံးထွက်အဆင့်သို့ တက်ရောက်ရန်
အာဂျင်တီးနား31 1 135 −2 4
နိုင်ဂျီးရီးယား310234 −1 3
အိုက်စလန်30 1225−3 1
၁၆:၀၀ MSK (UTC+3)
အခရိကျီယာ အရီနာ၊ မော်စကိုမြို့
ဒိုင်လူကြီး: Szymon Marciniak (ပိုလန်)
၂၁:၀၀ KALT (UTC+2)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၃၁,၁၃၆ ဦး
၂၂ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၂၂)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၀,၉၀၄ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Matthew Conger (နယူးဇီလန်)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၃,၄၇၂ ဦး
ဘရာဇီး32 105 1 +47ရှုံးထွက်အဆင့်သို့ တက်ရောက်ရန်
ဆွစ်ဇာလန်312054 +1 5
ဆားဘီးယား310224 −2 3
ကော့စတာရီကာ30 1225−3 1
၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၁၇)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 41,432 ဦး
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၃,၁၀၉ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: César Arturo Ramos (မက္ကစီကို)
ကရဲ့စတော့ဗ်စကီး အားကစာကွင်း၊ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၃၃,၁၆၇ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Felix Brych (ဂျာမနီ)
၂၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၂၇)
en:Thiago Silva 68'
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 43,319 ဦး
ဆွီဒင်320152 +36ရှုံးထွက်အဆင့်သို့ တက်ရောက်ရန်
မက္ကဆီကို320134 −1 6
တောင်ကိုရီးယား31023303
ဂျာမနီ310224 −2 3
၁၈ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၁၈)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၂,၃၀၀ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Joel Aguilar (အယ်ဆာဗေဒို)
၂၃ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၂၃)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 43,472 ဦး
en:Son Heung-min 90+3'
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၁,၈၃၅ ဦး
၁၉:၀၀ YEKT (UTC+5)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၃၃,၀၆၁ ဦး
ဘယ်လ်ဂျီယမ်330092 +79ရှုံးထွက်အဆင့်သို့ တက်ရောက်ရန်
အင်္ဂလန်3201 83+5 6
တူနီးရှား310258 −3 3
ပနားမား3003211 −9 0
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၃,၂၅၇ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Janny Sikazwe (ဇမ်ဘီးယား)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၁,၀၆၄ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Jair Marrufo (အမေရိကန်)
၂၄ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၂၄)
ဒိုင်လူကြီး: Gehad Grisha (အီဂျစ်)
၂၈ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၂၈)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၃၇,၁၆၈ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Nawaf Shukralla (ဘာရိန်း)
ကိုလံဘီယာ320152 +36ရှုံးထွက်အဆင့်သို့ တက်ရောက်ရန်
ဂျပန်31 1 14404[မှတ်စု ၁]
ဆီနီဂေါ31 1 14404[မှတ်စု ၁]
ပိုလန်310225 −3 3
↑ ၁.၀ ၁.၁ Fair play points: Japan −4, Senegal −6.
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၀,၈၄၂ ဦး
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၃၂,၅၇၂ ဦး
ဒိုင်လူကြီး: César Arturo Ramos (မက္ကဆီကို)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: ၄၂,၁၈၉ ဦး
ရှုံးထွက်အဆင့်တွင် ပုံမှန်ကစားချိန်ကုန်ဆုံးသွားသည့်တိုင် ရလဒ်တူညီနေပါက အချိန်ပိုဆက်လက်ကစားနိုင်သည်။ (၁၅ မိနစ်စီ နှစ်ပိုင်းကန်ရမည်ဖြစ်သည်။) အကယ်၍လိုအပ်ပါက အနိုင်ရရှိသူကို ပင်နယ်တီကန်၍ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
ကစားပွဲသည် အချိန်ပိုဆက်လက်၍ ကစားရတော့မည်ဆိုပါက အသင်းတစ်သင်းစီကို လေးကြိမ်လဲလှယ်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသို့ခွင့်ပြုသည်မှာ ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲများအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲအတွက် ဆုကြေးငွေများကို အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ချန်ပီယံ ၃၈ ၃၈
ဒုတိယ ၂၈ ၂၈
တတိယ ၂၄ ၂၄
စတုတ္ထ ၂၂ ၂၂
၅ မှ ၈ အဆင့်ထိ ၁၆ ၆၄
၉ မှ ၁၆ အဆင့်ထိ ၁၂ ၉၆
၁၇ မှ ၃၂ အဆင့်ထိ ၈ ၁၂၈
Hyundai– Kia Motors
↑ စံရုရှား အသံထွက်မှာ [tɕɪmʲpʲɪɐˈnat ˈmʲirə pə fʊdˈboɫʊ dʲvʲɪ ˈtɨsʲɪtɕɪ vəsʲɪmˈnatsətʲ]
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ "Golden consolation for magical Modric"၊ FIFA၊ 15 July 2018။
↑ ၃.၀ ၃.၁ "Ethics: Executive Committee unanimously supports recommendation to publish report on 2018/2022 FIFA World Cup™ bidding process" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ FIFA.com။ 19 ဒီဇင်ဘာ 2014။ 29 မတ် 2015 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (အကူအညီ)
↑ Russia united for 2018 FIFA World Cup Host Cities announcement။ FIFA.com။ 13 November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ မတ် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ FIFA Picks Cities for World Cup 2018။ En.rsport.ru (29 September 2012)။ 13 November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ မတ် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Russia budget for 2018 Fifa World Cup nearly doubles။ BBC News (30 September 2012)။ 17 February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ မတ် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Road to Russia with new milestone။ FIFA.com (15 January 2015)။ 21 March 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Zimbabwe expelled from the preliminary competition of the 2018 FIFA World Cup Russia။ FIFA.com (12 March 2015)။ 16 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Impact of Football Association of Indonesia suspension။ AFC (3 June 2015)။ 1 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ 2022 FIFA World Cup to be played in November/December။ FIFA.com (20 March 2015)။ 12 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Current allocation of FIFA World Cup™ confederation slots maintained။ FIFA.com (30 May 2015)။ 16 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Long road to Russia begins in Dili။ FIFA.com (11 March 2015)။ 16 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ FIFA World Cup™ Preliminary Draw: 1 week to go။ FIFA.com (18 July 2015)။ 16 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Organising Committee for the FIFA World Cup extends its responsibilities to cover 2018 and 2022။ FIFA.com (19 March 2013)။ 18 October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Konstantinovsky Palace to stage Preliminary Draw of the 2018 FIFA World Cup။ FIFA.com (10 October 2014)။ 31 December 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ "How Iceland (population: 330,000) qualified for the World Cup"၊ The Economist၊ 12 November 2017။ ၁၀ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 13 November 2017။
↑ "In first,4Arab countries qualify for FIFA World Cup Finals"၊ The Times of Israel၊ 12 November 2017။ ၁၀ ဧပြီ ၂၀၀၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 13 November 2017။
↑ Final Draw to take place in State Kremlin Palace။ FIFA.com (24 January 2017)။ 16 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Final Draw to take place at 18:00။ telegraph.co.uk (24 November 2017)။ 25 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ OC for FIFA Competitions approves procedures for the Final Draw of the 2018 FIFA World Cup။ FIFA.com (14 September 2017)။ 10 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၂၁.၀ ၂၁.၁ ၂၁.၂ Regulations – 2018 FIFA World Cup Russia။ FIFA.com။ 12 July 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Rest periods tor the players on the provisional list tor the 2018 FIFA World Cup Russia™။ FIFA.com (30 March 2017)။ 18 April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Organising Committee for FIFA Competitions: Updates on the FIFA World Cup™ and women’s tournaments (8 February 2018)။9February 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2018 FIFA World Cup Bid Evaluation Report: Russia (PDF)။ FIFA။ 14 December 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၆ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Russia to host next FIFA World Cup။ The Associated Newspapers of Ceylon Ltd။9August 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၆ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Почему у России осталось только 14 стадионов к ЧМ-2018 – Известия (Why are there only 14 stadiums for the Russia 2018 World Cup) (in Russian)။ Izvestia.ru (7 October 2011)။ 8 October 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၆ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2018 FIFA World Cup™ to be played in 11 Host Cities။ fifa.com (29 September 2012)။ 8 July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၆ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Russia on track for World Cup 2018, say FIFA inspectors"၊ Reuters၊ 21 October 2014။ ၆ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 29 October 2014။
↑ Stadium names for the 2018 FIFA World Cup Russia™ confirmed။ FIFA.com (8 October 2015)။ 11 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Stadium for 45,000 spectators for the World Cup in Nizhny Novgorod (in ru)။ stroytransgaz.ru။ 30 September 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၄ ဇွန် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The 2018 World Cup in Volgograd was put into operation (in ru)။ rsport.ria.ru။3April 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၄ ဇွန် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Archived copy။ 20 February 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၄ ဇွန် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Capacity at2of Russia's stadiums to be reduced"၊ The Oklahoman (via Associated Press)၊ 26 September 2014။ ၆ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 19 October 2014။
↑ Новый рекорд волонтерской программы ЧМ-2018 (in ru) (17 January 2017)။
↑ Набор волонтеров на ЧМ-2018 установил новый рекорд Чемпионатов мира (in ru)။ FIFA (17 January 2017)။ 1 June 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 December 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ - Волонтерская программа: F.A.Q. - FIFA.com (in ru)။ FIFA.com။ 10 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ames၊ Nick (27 March 2018)။ World Cup 2018: what isaFan ID and do I need one to watch games in Russia?။
↑ Wildie၊ Tom။ "Aussie soccer fan's World Cup dream crushed by new Russian visa rejection"၊ ABC News၊ 8 June 2018။
↑ "What World Cup fans going to Russia should know"၊ BBC၊6June 2018။
↑ Match schedules for FIFA Confederations Cup 2017 and 2018 FIFA World Cup™ unveiled။ FIFA.com (24 July 2015)။5October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ FIFA World Cup Russia 2018 – Match Schedule။ FIFA.com။ 11 September 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၄၂.၀ ၄၂.၁ FIFA World Cup Russia 2018 – Match Schedule။ FIFA.com (20 December 2017)။ 28 December 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၆ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The FIFA/Coca-Cola World Ranking – October 2017။ 16 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Match report – Group A – Russia-Saudi Arabia (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (14 June 2018)။
↑ Match report – Group A – Egypt-Uruguay (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (15 June 2018)။
↑ Match report – Group A – Russia v Egypt။ Fédération Internationale de Football Association (19 June 2018)။
↑ Match report – Group A – Uruguay v Saudi Arabia။ Fédération Internationale de Football Association (20 June 2018)။
↑ Match report – Group A – Uruguay v Russia။ Fédération Internationale de Football Association (၂၅ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group A – Saudi Arabia v Egypt။ Fédération Internationale de Football Association (၂၅ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group B – Morocco-Iran (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (15 June 2018)။
↑ Match report – Group B – Portugal-Spain (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (15 June 2018)။
↑ Match report – Group B – Portugal v Morocco။ Fédération Internationale de Football Association (၂၀ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group B – IR Iran v Spain။ Fédération Internationale de Football Association (၂၀ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group B – IR Iran v Portugal။ Fédération Internationale de Football Association (၂၅ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group B – Spain v Morocco။ Fédération Internationale de Football Association (၂၅ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group C – France-Australia (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၁၆ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group C – Peru-Denmark (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၁၆ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group C – Denmark v Australia။ Fédération Internationale de Football Association (၂၁ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group C – France v Peru။ Fédération Internationale de Football Association (၂၁ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group C – Denmark v France။ Fédération Internationale de Football Association (၂၆ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group C – Australia v Peru။ Fédération Internationale de Football Association (၂၆ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group D – Argentina-Iceland (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၁၆ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group D – Croatia-Nigeria (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၁၆ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group D – Argentina v Croatia။ Fédération Internationale de Football Association (၂၁ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group D – Nigeria v Iceland။ Fédération Internationale de Football Association (၂၂ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group D – Nigeria v Argentina။ Fédération Internationale de Football Association (၂၆ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group D – Iceland v Croatia။ Fédération Internationale de Football Association (၂၆ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group E – Costa Rica-Serbia (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group E – Brazil-Switzerland (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group E – Brazil v Costa Rica။ Fédération Internationale de Football Association (၂၂ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group E – Serbia v Switzerland။ Fédération Internationale de Football Association (၂၂ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group E – Serbia v Brazil။ Fédération Internationale de Football Association (၂၇ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group E – Switzerland v Costa Rica။ Fédération Internationale de Football Association (၂၇ ဇွန် ၂၀၁၈)။ 27 June 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 October 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Match report – Group F – Germany-Mexico (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group F – Sweden-Korea Republic (PDF)။ Fédération Internationale de Football Association (၁၈ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group F – Korea Republic v Mexico။ Fédération Internationale de Football Association (၂၃ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group F – Germany v Sweden။ Fédération Internationale de Football Association (၂၃ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group F – Korea Republic v Germany။ Fédération Internationale de Football Association (၂၇ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group F – Mexico v Sweden။ Fédération Internationale de Football Association (၂၇ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group G – Belgium v Panama။ Fédération Internationale de Football Association (၁၈ ဇွန် ၂၀၁၈)။ ၁၈ ဇွန် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Match report – Group G – Tunisia v England။ Fédération Internationale de Football Association (၁၈ ဇွန် ၂၀၁၈)။ ၂၄ ဇွန် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Match report – Group G – Belgium v Tunisia။ Fédération Internationale de Football Association (၂၃ ဇွန် ၂၀၁၈)။ ၂၃ ဇွန် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Match report – Group G – England v Panama။ Fédération Internationale de Football Association (၂၄ ဇွန် ၂၀၁၈)။ ၂၄ ဇွန် ၂၀၁၈ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Match report – Group G – England v Belgium။ Fédération Internationale de Football Association (၂၈ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group G – Panama v Tunisia။ Fédération Internationale de Football Association (၂၈ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group H – Colombia v Japan။ Fédération Internationale de Football Association (၁၉ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group H – Poland v Senegal။ Fédération Internationale de Football Association (၁၉ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group H – Japan v Senegal။ Fédération Internationale de Football Association (၂၄ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group H – Poland v Colombia။ Fédération Internationale de Football Association (၂၄ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group H – Japan v Poland။ Fédération Internationale de Football Association (၂၈ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ Match report – Group H – Senegal v Colombia။ Fédération Internationale de Football Association (၂၈ ဇွန် ၂၀၁၈)။
↑ FIFA Council decides on key steps for the future of international competitions။ FIFA (16 March 2018)။ 31 March 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 June 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ FIFA World Cup Prize Money (pdf)။ FIFA.com (27 October 2017)။ 29 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ FIFA and adidas extend partnership until 2030။ FIFA။ 28 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Coca-Cola renews Fifa football sponsorship until 2022။ Campaign။ 27 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gazprom agrees Fifa sponsorship deal။ SportsPro။7July 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hyundai-Kia drives on as FIFA Partner until 2022။ FIFA။ 18 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Qatar Airways announced as Official Partner and Official Airline of FIFA until 2022။ FIFA။ 11 May 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Visa extending World Cup deal for eight years။ Sports Business Daily။ 27 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wanda Group becomes new FIFA Partner။ FIFA။ 24 April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ FIFA and Anheuser-Busch InBev announce FIFA World Cup™ sponsorship for 2018 / 2022။ FIFA။ 27 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hisense becomes Official Sponsor of 2018 FIFA World Cup™။ FIFA။ 20 May 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ McDonald’s looking ahead to 2018။ FIFA။ 29 May 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mengniu Group added to Fifa World Cup sponsor line-up။ SportsPro။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fifa agrees massive World Cup deal with Vivo။ SportsPro။2June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fifa adds latest Chinese sponsor for World Cup။ SportsPro။ 14 March 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Alfa-Bank unveiled as first-ever Regional Supporter for the FIFA World Cup™။ FIFA။ 21 May 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fifa World Cup adds Rostelecom as regional partner။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Russian Railways announced as an Official European Supporter of the 2018 FIFA World Cup™။ 19 April 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၁၈_ဖီဖာ_ကမ္ဘာ့ဖလား&oldid=698252" မှ ရယူရန်